Birta uu ka sameeysaa fabriska ee ku saabsan ee birta ee ku saabsan ah - China Boegger
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Architectural Mesh > Taah>Dadka ee shubka
Dhijida bibka ah waxaa ku jira kuman oo yar oo birta ah oo ku dhamaadooyinka hore ah oo dhamaadooyinka uu soo dhameeyaa ama uu dhamaada xisaab oo uu aqoonsan. Waxaa lagu qeybin kartaa saddex nooc kala duwan: da'daabaha, dabka ah iyo barka. Dhammaan waxay leeyihiin goob badan oo la xidhiidh iyo midibada doorashada. Daahka bibka ah, sidana waxaa loogu yeedhi daahda siiyadda buux, ma jiro meelo oo kaliya, laakiin waxaa sidoo kale dabka iyo nuurka. Sidoo kale waxaa lagu haboonaa daad biyaha lagu sameeyo kala duduwan. Guryaha shahaadada, discotheuqeedii, galabtooyinka, dabadeedka iibiyaasha, xarunta baahan, xarfadeed iyo goobaha kale oo uu uu u baahnaa in uu sameeyo daad birta ah.
L biirka: salka ka hooseeya, salka la'aanta, alumiinium, birka,
L biyad-dii: 2/2.4/3.0 / 4.0/6/8/10/12 mm.
Daryeelka ee ee ee ee ee ee ee uu uu uu uu uu uu uu soo galo:
Shaqada ee ee ee ee aawadeed: da'daabaha, xisax, xisaab, rugbi.
I caawimaad: xaalad keynta
Aas midyaa 66 qaad.
I Midiba iyo midibka la xiriirayo.
I Solid, daawadeed adag.
I fasaxda iyo la jeediyo.
Inta muuqadiisu waa aqoon.
Waxaan la xiriirtaa in la xiriirto.
Ma uusan bureeyn midib ah.
Waana ahayd Naar.
Sharciga gaar ah aawadeeda daran, daahirka biyaha waxaa ahayd, daahir oo quruxsan. Waxay noqon kartaa goob qeybin la yaabaysaa, uu sameyn kartaa salka qarsoon iyo buuxsan. Dadka biyaha biyaha waxaa looga isticmaalaa sidii daryeelka daaqada, qeybta, daadka deriga, Qofka leh iyo si badan. Waxaa lagu codsan kartaa:
I dhiso sare.
I dhismo xafiiska.
I baackageerada ee lacagta: haddii daad bir ah ee birta ah, haddana lacagta lacagta lacagta ee PE iyo baahmooyinka u geli karton.
I spool baabuurta: daad birta la baaxaystayso oo ku yaal guribsiga ah, laakiyaha lacagta ee PE guryaha ku jira, oo ka dibay ka booska.
Horey:Dadka xiriirka jidhka ah ah
ShimmerScreen ee waxyaabaha badan oo ka yaabaysaa, waxaa laguu yahay dalka sare ee BCM arkitectural. Ganacsadaha iyo guryaha qofka ah ee dunda oo dhan waxay isticmaalaan biirka ahDaadyada shirkadaS in...
METAL BEAD CURTAINSXafiiska shuruudaha:Qaarka: Sus304, 316 iyo 316L, aluminium iyo birta kale.Midadaha waxaad ka heleysaa: Cadeyn lacag, baros, gaarga-pad, dahab, madoobada iyo midiba kale oo ay ku je...